စျေးဝယ်စင်တာများအတွက် Corona ချိန်ညှိခြင်း .. ! အရင်ကဘာမှမဖြစ်တော့ဘူး RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီစျေးဝယ်စင်တာများအတွက် Corona ချိန်ညှိခြင်း .. ! ဘာမှဟောင်းနဲ့တူလိမ့်မည်မဟုတ်
02 / 05 / 2020 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, coronavirus, ခေါင်းစီးသတင်း, နောက်ဆုံးမိနစ်, တူရကီ
Corona စျေး ၀ ယ်စင်တာများသို့ပြောင်းခြင်းသည်အရင်နှင့်မတူပါ
Corona ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ပိတ်ထားသည့်ဈေးဝယ်စင်တာများကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်လုပ်ဆောင်နေသည်။ လေ့လာမှု၏အတိုင်းအတာအရလူအများအပြားသည်စျေးဝယ်စင်တာများကိုလာရောက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီးအ ၀ င်ပေါက်များတွင်အဖျားတိုင်းတာသည့်ကိရိယာများရှိလိမ့်မည်။
Korana ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုပြန့်ပွားမှုကိုကာကွယ်ရန်အလို့ငှာအချိန်ကြာမြင့်စွာပိတ်ထားခဲ့သည့်စျေးဝယ်စင်တာများ (AVM) ကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများသည်ဆက်လက်ရှိနေပြီးကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းမှုနှင့်အတူကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်ရန်ဆောင်ရွက်မှုများသည်ရှေ့ပြေးကာလတွင်ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်ဟုအစီရင်ခံထားသည်။
Sözcü Erdogan Süzer၏အစီရင်ခံစာအရကာလသစ်တွင် X-Ray ကိရိယာများကိုဈေးဝယ်စင်တာ၏အဝင်ဝမှအကွာအဝေးမှမီးကိုတိုင်းတာသောကိရိယာများဖြင့်အစားထိုးလိမ့်မည်။ စျေးဝယ်စင်တာလုံခြုံရေးစနစ်သည်အဆောက်အ ဦး အတွင်းရှိလူမှုရေးအကွာအဝေးကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုင်းတာလိမ့်မည်။ စျေး ၀ ယ်စင်တာတွင်အဝေးသင်အခြေအနေကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီတူရကီ၏ Securitas နိုင်ငံတော်သမ္မတ Murat Kösereisoğl, ၎င်းတို့၏ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်များခေတ်သစ်အတွက်အကောင်အထည်ဖော်ခံရဖို့ AVMs လုံခြုံရေးအစီအမံများအတွက်ဦးစားပေးအပ်ပေးတော်မူ၏။
အသစ်သောကာလအတွင်းစျေးဝယ်စင်တာများတွင်လုံခြုံရေးပေးရန်ရည်ရွယ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများအပြင်ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီများသည်ကျန်းမာရေးလုံခြုံမှုကိုပေးရမည့်တာ ၀ န်ရှိကြောင်းထောက်ပြပြီးKösereisoğluကစျေးဝယ်စင်တာသို့မ ၀ င်မီစတင်ခြင်းနှင့်ဖောက်သည်များ၏ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုတိုင်းတာခြင်းဖြင့်အပူချိန်တိုင်းတာသည့်ကင်မရာများဖြင့်တိုင်းတာသည်။
Kösereisoğluက“ အပူတိုင်းတာကိရိယာများသည်ကင်မရာကိုအဝေးကကြည့်နေသည့်ဖောက်သည်များ၏အပူချိန်ကိုတိုင်းတာပြီးဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုကြည့်မည်။ "ကျန်းမာရေးပြproblemနာမရှိဘူး၊ မျက်နှာဖုံးစွပ်တယ်ဆိုရင် ၀ င်ခွင့်ပြုပါ။ " Kösereisoğluကသူတို့သည်တံခါးပေါက်များရှိတံခါးစစ်ဆေးရေးကိရိယာများ၏ sensitivity ကိုတိုးမြှင့်စေပြီးလက်နှိပ်စက်များအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
လူ ၅၀ ကိုလူ ၅၀၀ ၀ န်းကျင်ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုတွင်ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သည်
တူရကီ၏ Securitas နိုင်ငံတော်သမ္မတ Murat Kösereisoğlတစ်ဦးဟာဈေးဝယ်စင်တာဖောက်သည်ရဲ့လက်ခံရရှိအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချို့နံပါတ်နှင့်ထိုသို့သောတစ်ချိန်တည်းမှာ 10 ဖောက်သည်တစ်ဦးစျေးဝယ်စင်တာမှလူ 500 တက်လက်ခံရရှိကြောင်း 50 ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်အုပ်စိုးမှုလျှောက်ထားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်လျှင်, ရှေ့တိုးရန်အန္တရာယ်ကင်းအစီအစဉ်များကိုသူကဆိုသည်။
Kösereisoğluက“ စျေး ၀ ယ်စင်တာတွေရှိယေဘုယျဒေသများရှိဗီဒီယိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်သုံးစွဲသူများနှင့်လူမှုရေးအကွာအဝေးကိုကျွန်ုပ်တို့တိုင်းတာပါလိမ့်မယ်။ စျေးဝယ်စင်တာများသည်အခမဲ့ခရီးစဉ်များမဖြစ်နိုင်တော့ပါ။ ဖောက်သည်သည်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတွင်းကုန်တိုက်မှထွက်ခွာပြီးဖောက်သည်အသစ်များဝင်ရောက်နိုင်လိမ့်မည်။ ”
Goodyear, AVM သင့်ရဲ့ကားသစ်ရန်သင့်အားမိတ်ဆက်ပေးရန်, လမ်းများမှဖိတျချေါ
ဝန်ကြီး Turan: "အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းဟောင်းဖြစ်ပါတယ် Yordan ကြိုက်နှစ်သက်မပါဘူး"
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Uysal: "မြေအောက်ဆောက်လုပ်ရေးဟောင်း Gibi 5-6 တစ်နှစ်ဆွဲယူပါလိမ့်မယ်"
ဝန်ကြီးYıldırım: '' 'ငါရထားလမ်းများတွင်ထိုကဲ့သို့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုတှေ့မွငျဖူးဘူး' '
Kars ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Center က Bozkus သမ္မတကပြောပါတယ်ဘယ်နေရာမှာ Go မဟုတ်
အဘယ်သူမျှမကအခြားအာဏာရအေကေပါတီကမြန်ရထား Make နိုင်ခြင်းရဲစှမျးသတ်တိခဲ့သည်